Tantara: Zanakalahy Tsara Iray sy Zanakalahy Ratsy Iray - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Tonga mpiandry ondry i Abela. Mahaﬁnaritra azy ny mikarakara zanak’ondry madinika. Mitombo ho ondry vaventy izy ireny, ka tsy ela i Abela dia nanana andian’ondry iray manontolo handrasana.
Na dia maty aza i Abela dia mbola tsaroan’Andriamanitra ihany. Tsara i Abela ary tsy hadinoin’i Jehovah na oviana na oviana ny olona iray toy izany. Indray andro any àry dia haverin’i Jehovah Andriamanitra amin’ny ﬁainana i Abela. Ho afaka hiaina mandrakizay eto ambonin’ny tany izy amin’izay. Tsy hahaﬁnaritra ve ny hahafantatra olona sahala amin’i Abela?
Ahoana no ﬁheveran’i Jehovah ny fandatsahana ran’olona tsy manan-tsiny? (Gen. 4:10; Isaia 26:21)
Ahoana no ampisehoan’ny Baiboly fa mbola afaka ny tsy hivadika foana isika, na dia manohitra an’i Jehovah aza ny ﬁanakaviantsika manontolo? (Sal. 27:10; Matio 10:21, 22)